Bethesda Pinball nwere ọtụtụ RPG na obere pinball karịa ka ị chere | Androidsis
Ntughari nke Bethesda Pinball, egwuregwu RPG nwere ọtụtụ ihe karịa ịnwe anya
Mgbe ụfọdụ anyị na -enweta ihe ijuanya na ụfọdụ egwuregwu na ha na -ezo karịa nke ha pụtara na nlele ngwa ngwa. Ihe na -eme na Bethesda Pinball, egwuregwu nke sitere na mkpakọrịta na Zen Studios, na nke mbụ yiri ka ọ dị mfe na tebụl pinball aesthetically megharịrị ụwa atọ nke Bethesda.
Maka ihe ọ bụla, Bethesda Pinball na -ezobe karịa ma ozugbo ị malitere ịmaba n'ime otu tebụl ya, ị ghọtara na kama otu egwuregwu, anyị nwere atọ, ebe tebụl ọ bụla dị na mbibi, Elder Scrolls V: Skyrim na Fallout, ha nwee ọtụtụ ọdịnaya na awa egwuregwu dị n'ihu. Ọ bụrụ na nke a anyị na -agbakwunye ejiko maka ịsọ mpi anyị na ndị egwuregwu ndị ọzọ, anyị nwere egwuregwu vidiyo ruo ọtụtụ ọnwa.
1 Ihe RPG nke Bethesda Pinball
2 Omume gị, nke ị ga -agbagide ma kwadebe
3 Ịgagharị ụwa
Ihe RPG nke Bethesda Pinball
M ga -elekwasị anya na ihe ọ bụla ma Okenye mpịakọta V: Skyrim pinball table, egwuregwu vidiyo nke m nwere mmasị na PC yana amakwaara m nke ọma maka awa egwuregwu m nọrọ ya mgbe ewepụtara ya maka kọmpụta n'oge ahụ.
Tupu ịga n'ihu na RPG ahụ nke gụnyere tebụl Skyrim, aghaghị m ịkọwa nke ahụ mgbe ị nwere ike kwụọ 3,39 € iji zụta tebụl aSite na njikọta na inweta mmeri iri abụọ, ị ga -enwe ike imepe ya ma ọ bụrụ maka ebumnuche ọ bụla mepere ọzọ n'ime abụọ ahụ na mbụ. Nke a bụ usoro ịkwụ ụgwọ nke Bethesda na-eji, nke ọ gbadoro anya na egwuregwu egwuregwu egwuregwu 20, n'agbanyeghị na ndị a kwesịrị ịkwụ 1 mkpụrụ ego ọla edo ma ọ bụrụ na ịzụtabeghị tebụl.
Bethesda Pinball, ewezuga njikwa ụdịrị n'ụdị egwuregwu a, ga -enye gị ekwe omume imeghe mkpuchi mgbe niile. Nke a bụ otu etiti etiti iji kpụọ ụdị agwa ahụ ị ga -emepụta site na mbido mbụ na ị ga -agbago elu iji mee ka ọ sie ike wee si otú a merie ọtụtụ egwuregwu na egwuregwu.
Omume gị, nke ị ga -agbagide ma kwadebe
Nke a pụtara na ị ga -enwe ike ịhọrọ n'etiti Mage mmadụ, Knight mmadụ, Mage Elf, Archer Elf, Argonian, Khajita na Orc. Mgbe ịhọrọ agwa gị, ị gaghị enwe ike ịlaghachi azụ ọzọ, belụsọ na ịchọrọ ihichapu ọganihu niile enweta na egwuregwu dị iche iche, yabụ buru nke a n'uche. Ma ọ bụ na agwa a ga -abụ nke a na -eji mgbe ị ga -alụ ọgụ n'ime ọrụ iri na otu yana ọtụtụ nke abụọ nke tebụl Skyrim na -ezo.
Mgbe anyị bidoro bọọlụ nke mbụ, ị ga -enwe n'elu aka nri nhọrọ imeghe igbe ahụ. Nke a mepere usoro nhọrọ dịka ngwa ahịa, ngwa ọgụ, ọgwụ, nka, anwansi, ekike na ọtụtụ. Nkebi nke ọ bụla na -emepere gị nhọrọ nke iji ihe ndị ị nwetara mgbe ị na -egwu egwu, jiri ngwa ọgụ wee họrọ agwa ị họọrọ, ma ọ bụ jiri ọgwụ ọ bụla tinye ikike na ihe ndị ọzọ.
Na ngalaba anwansi, ị ga -enwe afa nke agwa gị na -enye, dịka ọkụ ma ọ bụ ọgwụgwọ n'ọnọdụ Argonian na ọkwa 1. Anyị na -ahọrọ llamas, anyị ga -ahụ ọnụ ahịa ya, mmebi ya na oge ya. Pịa kwadebe ma anyị ga -enwe ọkụ anwansi a ka ọ tụkwasị ndị iro ya.
Ngalaba nka na -adọrọ mmasị nke ukwuu n'ihi na ọ ga -enye gị ohere ịhụ ọkwa ị nwere na anwansi, smithy, melee, ịgba ụta, ezi uche ma ọ bụ ịtụ mkpọchi. Anyị na -emepe smithy ma anyị nwere ike ịhụ na anyị nwere ike iru ọkwa 100 nke ịkpụzi dragon. Anyị nwere ike wuo ihe na ngwa ọgụ n'obodo na obodo ebe ị banyere.
Egwuregwu ahụ na -elekwasị anya n'igwe eji agba bọọlụ iji nweta usoro nke ndị isi na nke abụọ na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ ga -ebilite mgbe bọọlụ gafere ụfọdụ veranda. Ebumnuche anyị bụ imeri Alduin, onye na -eri ihe nke ụwa, yabụ ihe niile ga -elekwasị anya na ọrụ a pụrụ iche.
Ị na -atụba bọọlụ, ọrụ dị iche iche amalite gbaa akara dragọn ahụ na -egbu maramara na ndị iro na -ezube imecha ha. Ị ga -enweta ngwa ọgụ, ngwa agha na ihe ndị ọzọ, dịka agwa ahụ nwere ahụike, anwansi na ume. Nke a ga -emebi mmebi dabere na ọkwa nka, ịdị arọ, uwe, na ọgwụ.
Ọ dị na mpaghara etiti okpokoro ebe ndị iro ga -apụta, dịka ha nwere ike bụrụ ndị ohi, anụ ọhịa wolf ma ọ bụ ndị dike, nke anyị ga -akụrịrị ugboro ole anyị nwere ike, ebe ọ bụ na ebe a ka a ga -arụ ọrụ nke agwa anyị nwere.
Na mgbakwunye, anyị ga-enwe mgbọ nka, ndị na-agba ụkwụ, n'ọgba akụ, igbe akụ (ebe ị ga-eji ụdị mkpọchi ụdị Skyrim), obodo ma ọ bụ obodo ebe ịzụrụ na imepụta ihe, dragons iji mkpu akwa dragọn kpọọ, ụlọ maka ajụjụ ndị dị n'akụkụ, guilds, otu, ndị na -enye ọzụzụ na ọtụtụ ndị ọzọ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, tebụl pinball si Bethesda Pinball na -aga ogologo. ị ga -achọ ogologo oge iji rute ọkwa kachasị elu na igwe ojii, melee, anwansi na ọbụlagodi nke agwa ahụ n'onwe ya, yabụ ọ bụrụ na ị na -achọ egwuregwu dị omimi, nke izizi nwere ezigbo teknụzụ, ọ na -ewe oge iji wụnye ya.
Nke a bụ nyocha mere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Ntughari nke Bethesda Pinball, egwuregwu RPG nwere ọtụtụ ihe karịa ịnwe anya
Ndị a bụ agba maka Huawei P10
Official LinageOS ma ọ bụrụ na ọ na-enye ohere igwu Pokemon Go na ngwa ndị na-adịghị arụ ọrụ na mgbọrọgwụ ọnụ